Zvikoro Zvovhurwa Varombo Vachidzoserwa Kumba
Gunyana 06, 2021
Zvikoro zvakavhura nemusi weMuvhuro vamwe vakuru vezvikoro vachidzinga vana vanasina kubhadhara mari yechikoro kunyange hazvo hurumende ichiti izvi hazvifaniri kuitwa.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 muHarare yakaratidza kuti vana vakawanda vadzokera kuchikoro uye vachifara nekuvhurwa kwezvikoro mushure menguva yakareba zvambovharwa nekuda kwedenda reCovid-19.
Mumwe mudzidzi wepane chimwe chikoro, anonzi Melanie akaudza Studio 7 kuti anofara nekudzokera kuchikoro sezvo ange ave nenguva asina kuona shamwarri dzake.
Asi kunyange hazvo vadzidzi vadzokera kuchikoro, muzvikoro zvakawanda mange musina varairidzi vakawanda uye vamwe vakuru vezvikoro vange vachidzorera vana kudzimba nekuda kwezvikonzero zvakasiyayama zvinosanganisira kusabhadhara mari yechikoro.
Pane zvimwe zvikoro zvakaita seSunngingdale 2 ne Gwinyai Primary vakuru vezvikoro vange vakamira pamagedhi vachirambidza vana vasina kubhadhara kupinda muchikoro.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Association of School Heads VaMunyaradzi Majoni, vaudza Studio 7 kuti ongororo yavakaita neMuvhuro yakaratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana zvevarairidzi ndizvo zvaenda kubasa chete nhasi.
VaMajoni vati nyaya yekuti varairidzi havana kuenda kubasa ndiyo yange ichiita kuti vakuru vezvikoro vadzorere vana kudzimba.
Vatiwo mamwe matambudziko avakaona muzvikoro inyaya yekuti hamuna zvekudzivirira vana kubva kudenda reCovid-19.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe VaObert Masaraure vati nhengo dzavo dzaswera hadzo dzichiratidzira nekusafara nemari yadziri kutambiriswa uye mamiriro akaita nyaya yemabhazi sezvo kambani yeZUPCO iri kutatarika kuita basa.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomiriria varairiridzi rePorgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr Takavafira Zhou, vaudza Studio 7 kuti varairidzi vaenda kubasa vashomasa nekuda kwezvikonzero zvinozikanwa zvakaita sekuti varairidzi havana mari dzinokwana.
Vati varairidzi venda kuchikoro ndeyava vanogara pedyo nezvikoro. VaZhou vatiwo havafasi kufara kuti nhengo dzesangano ravo dzakaendeswa kudare repamusoro kuti dzisaramwe mabasa vachiti mwana anonzi akavakwidza nyaya kudare haatomboziva nezvavo.
Mwana wekuGwanda akakwira kudare svondo rapera nechikumbiro chekuti varairidzi vasaramwe mabasa uye nyaya iyi ichanzikwa nedare repamusoro nemusi weChitatu kuBulawayo.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumubatanidzwa wemasangano anomirira vabereki, kana kuti School Development Associations, VaBanny Manokore, vakaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vana vangavachidzorwa kumba asi vakati inyaya yekuti muzvikoro hamuchabvumidzwa vana vakawanda nekuda kweCovid-19. Vati vanotarisira kuti zvinhu zvichange zvanakaka kutanga nemusi weChipiri.
Asi kunyange hazvo masangano anomirira varairidzi nevakuru vezvikoro achiti varairidzi vashaoma vaenda kubasa, mutauriri webazi rezvedzidzo VaTaungana Ndoro vaudza Studio 7 kuti varairidzi vanodaika zvikamu makumimasere vakaenda kubasa neMuvhuro.
Vakayambirawo vakuru vezvikoro vari kudzinga vana kuti zvavari kuita zviri kunze kwemutemo.